ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफले एउटै फिल्म खेल्ने ! « Ramailo छ
ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफले एउटै फिल्म खेल्ने !
ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफमा निकै समानता पाइन्छ । यी दुई अभिनेता एक्सनमा अब्बल छन् । यो सँगै यी दुईबिच सुगठिलो शरीर र खतरा डान्सको पनि समनाता छ । अब यी दुई कलाकार एक साथ पर्दामा देखिने भएका छन् ।
केहि समय पहिला यस कुराको घोषणा फिल्मका निर्देशक सिद्धार्थ आन्नदले गरेका थिए । एक्सनले भरिपूर्ण फिल्ममा पहिलो पटक ऋतिक र टाइगरलाई कास्ट गर्ने खुलाएका थिए । यशराजको ब्यानरमा बन्न लागेको यस फिल्ममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सन हुने बताइको छ । एक अन्तरवार्तामा टाइगरले यस फिल्ममा ऋतिक र उनको बीच निकै एक्सन स्टन्ट रहेको खुलाएका थिए ।
ऋतिक टाइगरको बच्चा देखि नै आर्दशको रुपमा रहेका थिए । उनीसँग लड्नु टाइगरको लागि सामान्य छैन तर ऋतिकको सामना गर्नको लागि आफुलाई बलियो बनाउँदै छन् । फिल्मको नाम पनि अहिलेसम्म तय भएको छैन । तर यो फिल्म २०१९ को गान्धी जयन्ती सम्म आउने कुरा चलेको छ ।
ऋतिक रोशन टाइगर श्राँफको गुरुको भुमिकामा हुने छन् र यस फिल्ममा ‘बेफिक्रे’को हिरोइन वाणी कपूर देखिने छिन् । ऋतिकले ऐश्वर्या रायसँग २००६ सालमा फिल्म धुम २ मा काम गरेका थिए ।